नारायण पौडेल, Author at · Page2of 53
Author: नारायण पौडेल
अर्थमन्त्रीसँग बैंकर्सको गुनासोः हाम्रो नाफा ह्वात्तै घट्यो, डेपुटीले भनेः चिन्ता नगर्नुस्
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग नाफा घटेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे अर्थमन्त्रीले डाकेको छलफलमा भाग लिन मन्त्रालय पुगेका बैंकर्सले नाफा घटेको गुनासो गरेका हुन् । स्प्रेड दरको नयाँ गणना बिधी र काउन्टर साइक्लिकल बफरका कारण बैंकहरुको नाफा …
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रश्नै प्रश्न बर्षाएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँग डा. खतिवडाले अर्थतन्त्र र वित्तिय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे साढे २ घण्टा छलफल गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकका …
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले माघ १४ गतेदेखि सर्वाधिक प्रतिफल दिने डिबेञ्चर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले आव्हानपत्र जारी गर्दै हालसम्म सर्वाधिक १०.३५ प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित गरिएको ७ वर्ष अवधीको डिबेञ्चर जारी गर्न लागेको हो । ‘१०.३५ % एडिबिएल कृषि बैंक ऋणपत्र …
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले ६ महिनामा ६८ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्त अवधीको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार ६८ करोड ७७ लाख नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो । बैंकले २०७५ पुस मसान्त अवधीमा ७७ करोड नाफा …
काठमाडौं । ‘जीवन अमुल्य छ, संसारका हरेक वस्तुको मूल्य छ तर जीवनको मूल्य हुन्न । मानव जीवनको मूल्य आफैंले तोक्ने हो । म कुन हैसियत र क्षमताको मान्छे हुँ ? भन्ने कुरालाई मौद्रिक मूल्यमा ढाल्नुपर्छ । र त्यो भनेको जीवन बीमा नै हो …
काठमाडौं । नेकपा केन्द्रिय सदस्य तथा विदेश विभाग उप प्रमुख बिष्णु रिजालले एमसीसीबारे नयाँ तथ्य उजागर गरिदिएका छन् । उनले एमसीसी परियोजना झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा आरम्भ भएको तथ्य उजागर गरिदिएका हुन् । त्यति मात्रै होइन, उनले एमसीसीमा बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, खिलराज रेग्मी, …
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले भारतीय आर्थिक मन्दिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा खुम्चिने बताएको छ । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आइएमएफले लाउरा जस्माइलोको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली माफर्त नेपालको अर्थतन्त्रबारे …
काठमाडौं । १९ वटा नयाँ वस्तु तथा सेवाहरुको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड तयार भएको छ । नेपाल गुणस्तर परिषदको माघ ३ गते बसेको बैठकले १९ वटा नयाँ वस्तु तथा सेवाहरुका लागि नेपाल गुणस्तर मापदण्ड तय गरेको हो । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक …
काठमाडौं । अमेरिकामा शक्तिशाली राष्ट्रपति ट्रम्पलाई जति गाली गरे पनि हुन्छ, जे जस्तो बुख्याचा बनाएर लात हाने पनि हुन्छ, मनपरि झपारे पनि हुन्छ, जस्तो कार्टुन बनाए पनि हुन्छ, नाङ्गै पारेर हसिमजाक उडाए पनि हुन्छ, केही निषेधित क्षेत्रभित्र मात्र छिर्न नपाईने हो, मनलाग्दी जति …
काठमाडौं । लगानी बोर्डले स्वीजरल्याण्डको कम्पनी जुरिच इन्टरनेशनल एजीसँग निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव मागेको छ । बोर्डले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै जुरिच एजीसँग विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव मागेको हो । नेपाल सरकारले २०७५ चैत १५ र १६ मा आयोजना गरेको अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा निजगढ …
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पति शुद्धीकरणको जोखिम निवारणका लागि गो-एएमएल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएको छ । माघ १ गतेबाट बाणिज्य बैंकहरुमा अनिवार्य लागु गरिएको गो-एएमएलले सम्पति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निरुत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति …
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा निक्षेप थुप्रिन थालेको छ । २७ वटा बाणिज्य बैंकहरुले पछिल्लो २५ दिनमा ४४ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप वृद्धि गरेका छन् । तर कर्जा भने जम्मा २९ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको देखिन्छ । मंसिर ३० देखि पुस २५ गतेको …